Haweeneyda Afrika ugu taajirsan oo dooneysa in ay madaxweyne noqoto. - Latest News Updates
Haweeneyda Afrika ugu taajirsan oo dooneysa in ay madaxweyne noqoto.
Isabel dos Santos, oo ah haweeney u dhalatay dalka Angola, ahna haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa sheegtay in ay dooneyso in ay u tartanto xilka madaxweynenimo ee dalka Angola.
Haweeneydan oo hataan loo heysto fadeexo musuqmaasuq ayaa waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalka Angola José Eduardo dos Santos, kaas oo Angola xukumayay 38 sano.
Xafiiska dacwad oogaha dalkaas ayaa sheegay in ay ku raad-joogaan lacag dhan hal bilyan oo doolar oo ay shegeen in ay doonayaan inay kala soo wareegaan haweeneydaas, lacagtaas oo Dowladda Angola sheegtay in laga dhacay dowladda, haseyeeshee eedeymahaas waa ay beenisay Isabel.
Ms Dos Santos, oo da’deedu tahay 46 sano jir ayaa waxay kamid tahay haweenka ugu taajirsan dunida, waxaana wargeyska the Forbes uu hantideeda ku qiimeeyay lacag dhan 2.2 bilyan oo doolar, taas oo ka dhigan in ay tahay haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika.
Sanadkii 2016-ka, aabaheed oo xilligaas xilka hayay ayaa waxaa uu u magacaabay madaxa shirkadda shidaalka ee Angola, waxaana ka dhashay buuq badan.
Balse shaqadaasi waxaa sanadkii 2017-ka ka qaaday Joao Lourenço oo ahaa ninkii badelay aabaheed.
Maxaa kale oo ay sheegtay?
Wareysi ay BBC-da kula yeelatay magaalada London ee dalka Ingiriiska, waxay ku celcelisay in noolasheeda ay khatar ku jirto, haddii ay dib ugu laabato Angola.
Waxay intaa raacisay in ay tahay qof wadani ah, waxbadanna ay ka qaban karto dalkeeda haddii ay madaxweyne noqoto.
“Hogaaminta sideedaba waa in aad dadka u adeegtaa, waxaan sameynayaa waxwalba oo ay igu qaadato,”ayay tiri.
In ay u tartanto xilka ugu sareeya ee dalka ay u dhalatay ayaa ah mid aan la fileynin, sababtoo ah waxaa inta badan looga bartay in ay tahay qof ganacsato ah oo aan dan ka lahayn siyaasadda.
Maxkamad ku taala dalka Angola ayaa bishii lasoo dhaafay amartay in la xanibo akoonada ay ku leedahay bangiyada dalkaas, gaar ahaan “dhaqaalihii ay ka sameysay shidaalka Angola”, kadib markii lagu eedeeyay in ay lacag lunsatay.
“Waxani waa been abuur, waxayna qeyb ka yihiin weerarada la igu hayo oo ay ka dambeyso dowladda hadda jirta, waana arrin siyaasadeysan,”ayay raacisay.
Nin kale oo ay walaalo yihiin, laguna magacaabo, José Filomeno dos Santos, ayaa sidoo kale loo heysta in uu ku kacay musuqmaasuq, waxaana loo heysta lacago la sheegay in uu dhacay xilligii uu aabihii xilka hayay.